Activities Plan » Technological University (Kyaukse)
Alumni of TU(KSE)
Home » About » Activities Plan
The Computer subjects_ Software, Hardware, Application, Information Science and Computational Mathematics are taught at the Computer University of Hinthada.
The following associations and society are organized in the Computer University of Hinthada.
Sport groups are also organized in the Computer University of Hinthada. The matches of Fusel football and chess will be held for student.
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ)တွင် သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိသော ကွန်ပျူတာဘာသာရပ် များမှာ ပရိုဂရမ်နည်းပညာ(Software)ဘာသာရပ်များ ၊ စက်နည်းပညာ(Hardware) ဘာသာ ရပ်များ၊ အသုံးချနည်းပညာ (Application)ဘာသာရပ်များ၊ သုတသိပ္ပံ (Information Science) ဘာသာရပ်များနှင့် တွက်ချက်ရေးသင်္ချာ(Computational Mathematics) ဘာသာရပ် များဖြစ်ပါသည်။
ပုံ(၃) Hardware Labတွင် ကျောင်းသားများကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ပြုလုပ်နေပုံ
ပုံ(၄) Hardware Labတွင် ဆရာမမှလက်တွေ့သင်ကြားပြသနေပုံ
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ)အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအသင်းအဖွဲ့များအား ဖွဲ့စည်းထား ရှိပါသည်။
(ဃ) အားကစားဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များ ၊ အားကစားအမျိုးအစားနှင့် ပွဲစဉ်များ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ)အနေဖြင့် အားကစားအသင်းများဖွဲ့စည်း၍ ဆောင်ရွက်ထား ရှိပါသည်။ ကျောင်းသားများအား မိုးရာသီအမျိုးသားဖူဆယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ ၊ စစ်တုရင် ပြိုင်ပွဲများကျင်းပပါသည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ)ရှိ ကျောင်းစာကြည်တိုက်တွင် ပြဌာန်းစာအုပ်များ၊ သုတ၊ ရသဆိုင်ရာစာအုပ်များ၊ သုတေသနနှင့်ဆိုင် စာတမ်းများကိုထားရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူများ စာရှာဖွေရာ၌လွယ်ကူစေရန် Computer(၃)လုံးအား Internet ချိတ်ဆက်၍ ထားရှိပါသည်။